मिडियाको दबाबले मन्त्री बनें : डोबाटे विश्वकर्मा (अन्तर्वार्ता) - Action Khabar - Nepali Online News Portal
अहिले सत्तारुढ गठबन्धनसँग पनि सल्लाह नै नगरी उनले मन्त्रीमा नियुक्त गरिदिए । मन्त्री नियुक्त भएपछि डोबाटेसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानीः
पार्टीमा छलफल भयो होला । मिडियाले धेरै चासो र चिन्ता गर्यो । मिडियाको दवावले पार्टीलाई महशुस भयो होला । पार्टीले गल्ती गरेको महशुस गरेर मन्त्री बनायो भन्ने ठानेको छु । यो संविधानको कार्यान्वयन हो । समानुपातिक सिद्धान्तलाई पालना गर्यो, गण्डकी सरकारले भन्ने बुझ्नुपर्छ । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो, खुशीको अनुभुति गरेको छु । पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा हो । गौण रुपमा लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउवा पोखरा आउनु र तपाईं मन्त्रीमा नियुक्त हुनुमा कुनै तादम्यता छ ? कि मुख्यमन्त्रीले स्वविवेकले गर्नुभयो ?
- २६ आश्विन २०७८, मंगलवार १६:२३ मा प्रकाशित